टीएमएसबाट कसरी गर्ने सेयर कारोबार ? कति लाग्छ सेवा शुल्क ? - Akhabaronline
पछिल्लो समय सेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ । अझ सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत् नै गर्न मिल्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।
नेप्सेका अनुसार अहिले औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार अनलाइनबाट मात्रै हुन थालेको छ । नेप्सेका अनुसार टीएमएस लिनेको संख्या करिब ३ लाख ५० हजार पुगेको छ । तथ्यांक हेर्दा हालसम्म २८ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले डिम्याट अकाउन्ट खोलेका छन् । त्यसैगरी मेरो सेयर खोल्नेहरुको संख्या पनि १५ लाखभन्दा बढी छ ।
अझ सानो लगानीबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिने भएकाले मानिसहरुले आफूले बचत गरेर राखेको पैसा सेयरमा लगानी गर्न थालेको देखिन्छ । अन्य कुनै व्यवसाय शुरु गर्नका लागि १÷२ लाख रुपैयाँले पुग्दैन । तर सेयरमा लगानी गर्नका लागि २० हजारबाट मात्रै शुरु गर्छु भन्न पनि सकिन्छ वा त्योभन्दा कम पैसाबाट लगानी शुरु गर्न सकिन्छ ।
टीएमएसको पूरा रुप हो, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम । यो अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
परम्परागत रुपमा ब्रोकर कार्यालयमा गएर मौखिक वा लिखितरुपमा सेयर खरिद वा बिक्रीको आदेश दिएपछि मात्रै सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर टीएमएस आइसकेपछि यो सेवा लिएका लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता छैन । लगानीकर्ताले घर, कार्यालय वा आफू बसेकै ठाउँबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायतका डिभाइसमा लगइन गरी सेयर कारोबार गर्न सक्छन् ।
ब्रोकर कार्यालयलाई उनीहरुको नामसँगै १, २, ३ जस्ता नम्बरले पनि चिनिन्छ । यदि तपाई ब्रोकर नम्बर १ मा गएर टीएमएस सेवा लिनुहुन्छ भने तपाईंले www.tms01.nepsetms.com.np मा गएर ब्रोकर कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको युजर नेम र पासवर्ड टाइम गरी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकर कार्यालयको नम्बर ब्राउजरमा टीएमएस लगइन गर्दा नै उल्लेख हुन्छ ।
सेयर कारोबार भनेको खरिद वा बिक्री गर्नु हो । तपाईंले कुनै सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने खर्च कतिको कारोबार हो भन्नेले अर्थ राख्छ ।
अर्थात् तपाईंले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नु भएको छ भने ०.४ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म ०.३७ प्रतिशत ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत शुल्क, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ०.३० प्रतिशत शुल्क १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत शुल्क लाग्छ ।
सेयर बिक्री गर्दा फाइदा भएको पैसामा मात्रै ५ प्रतिशत कर लाग्छ भने डिपी शुल्क भनेर प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ लाग्छ । त्यसबाहेक धितोपत्र बोर्डले पनि ०.०१५ प्रतिशत कमिसन लिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत एजेन्ट राख्न पाउने
ग्लोबल र सनराइज बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको कारबाहीमा बैंकर्स संघ असन्तुष्ट
चिसोबाट बच्न यसो गर्नुहोस
‘भ्यालेन्टाइन डे’ सँग जोडिएका केही रोचक तथ्यहरु
अनुहारमा आएको कालो पोतोबाट छुटकारा पाउन यी उपाय !!